Famerenana ny fitokisam-bahoaka :: Tsy hitsitsy an’ireo mpambotry firenena ny governemanta • AoRaha
Famerenana ny fitokisam-bahoaka Tsy hitsitsy an’ireo mpambotry firenena ny governemanta
Nitatitra ny fitsidihana distrika sy tanàna maromaro nataon’ireo delegasiona notarihiny ny Praiminisitra, Ntsay Christian, omaly.
Novakiany bantsilana ny fisian’ny gaboraraka amin’ny tontolon’ny Fitsarana sy ny fitandroana ny filaminana ary ny fiarovana ny fananam-bahoaka. Manoloana izao olana miteraka tsy fifampito­kisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra izao dia nilaza ny handray fepetra hentitra hanasaziana an’ireo mpanao ratsy, fa indrindra ireo tompon’andraiki-panjakana misahana ny faritra sy ny lafin-tany, miaraka amin’izay mpiray tsikombakomba aminy ny lehiben’ny governemanta.
“Tsy azo ekena intsony ny tsy fahamendrehana sady tsy hanavahana na iza na iza ny fanasaziana. Handefa mpanara-maso manokana izahay amin’ny fampandehanan-draharaha. Raha toa ka tsy mandeha amin’ny laoniny ny fitantanana ny fananam-panjakana sy ny fampiharana ny marina dia haiditra am-ponja ireo tompon’ antoka izany. Etsy an-danin’ izany, ny Fitsarana no mpa­moa­ka didy amin’ny anaran’ny vahoaka ka raha tsy mipetraka ny fahamarinana dia hahazo vahana ny mpanao ratsy”, hoy ny Praiminisitra, Ntsay Christian.
Notsipihiny koa fa mbola manjaka ny halatr’omby. Maro ireo Malagasy no lasa mahantra. “Anjaran’ny delegem-panja­kana sy ireo lehiben’ny distri­ka tsirairay avy no manara-maso sy manamarina ny taratasin’ omby. Misy tambajotra lehibe mampirongatra ny halatr’ omby ka tokony hiara-hientana ny olona hanatratra ny ao ambadik’izany. Sahia mijoro mitoroka ireo mpangatlatra ianareo”, hoy hatrany izy.
Tany Mandritsara, Andilamena, Besalampy, ary Tsara­tanana no nilazan’ny lehiben’ ny governemanta fa miha voafehy ny fitrandrahana ireo vokatra any an-toerana saingy ny fandriampahalemana no sakana.
Fitakiana tambin-karama :: Manohy ny fitokonany ireo mpianatra ho mpitsabo
Kolikoly teny Tsimbazaza :: Naverina any amin’ ny Bianco ny raharaha depiote 79